AUKEY GanFAst: Itshaja ezitsha zokukhawulezisa | Iindaba zeGajethi
IGaNFast: Uluhlu olutsha lweeshaja zokutshaja ngokukhawuleza ezivela kwi-AUKEY
Ukutshaja ngokukhawuleza kuyaqhubeka nokuzuza umhlaba kwihlabathi liphela kuzo zonke iintlobo zezixhobo. Sibona ngokuhamba rhoqo kwii-smartphones, kumanqanaba amaninzi, ukongeza kwezinye izixhobo ezinjengeetafile nazo ziyayixhasa. Ukongeza, sifumana iitshaja ezisetyenziselwa ukutshaja ngokukhawuleza, njengolu luhlu lutsha luboniswa yi-AUKEY. Olu luhlu lwayo lweGaNFast, olubonakala ikakhulu kubungakanani obuncinci bezi tshaja.
Ngolu luhlu, i-AUKEY ifuna ukubonelela ngento eyahlukileyo kubasebenzisi abafuna ukubiza ii-smartphone okanye iithebhulethi zabo ngamaxesha onke. Inketho esiza kuyenza ukwazi ukusebenzisa ekhaya, eofisini okanye kwiholide. Asizukuba neengxaki kolu luhlu lweeshaja ezikhawulezayo.
I-AUKEY iphuhlise itekhnoloji yayo yeGaNFast kolu luhlu lutsha lweetshaja. Isinika intlawulo ephindwe kathathu ngokukhawuleza, kodwa ngetshaja eyisiqingatha sobukhulu bezinye izixhobo ezikweli candelo lentengiso. Ke kukhululeke ngakumbi ukuba umsebenzisi abe nakho ukuyiphatha ngawo onke amaxesha.
Sidibana ne- zizonke iitshaja ezintathu ezikolu luhlu ukuba i-AUKEY isizisa kuthi. Ngamnye kubo usibonisa iinkcukacha ezithile ezahlukeneyo, ukongeza ekubeni unesidibanisi esahlukileyo. Nangona zonke zibonakaliswe ngobungakanani bazo obuncinci kunye nesantya esiphezulu sokulayisha. Ziyimpawu zoluhlu.
1 I-AUKEY PA-Y19
3 I-AUKEY PA-Y21
Siqala ngale modeli, ibizwa ngokuba yi-Y19, ukusuka kolu luhlu lwe-AUKEY. Inesidibanisi sohlobo C lwe-USB, eyeyona ixhaphakileyo kwimarike ye-smartphone namhlanje. Ndiyabulela koku, le tshaja iyahambelana neefowuni zebranti ezinje ngeSamsung, LG, Google Pixel okanye iifowuni ze-iPhone, nkqu neeMacs.Oku kuyakuvumela abasebenzisi ukuba bafumane okuninzi kuwo onke amaxesha.
Amandla ale tshathi ye-AUKEY yi-27 W. Njengoko besesitshilo, ubukhulu bayo buncinci yenye yeendlela eziluncedo olu luhlobo lweGaNFast lophawu luza kuthi. Le tshaja inemilinganiselo ye-32x 36 x 36mm, eyenza ukuba ibe nkulu kuneyona ngqekembe ye-euro ezimbini. Into ethi iququzelele ukuthuthwa kwayo ngamaxesha onke. Kungenxa yoko le nto zilungele ukuhamba.
I-AUKEY iqinisekisile ukuba ukumiliselwa kwetshaja izakwenzeka ngenyanga kaJanuwari. Okwangoku, unokuyibona kwiAmazon ngaphambi kokumiliselwa kwayo kwaye unolwazi ngakumbi malunga neempawu zayo. Iyafumaneka kule khonkco.
Okwesibini, siyifumana le tshaja ingena phantsi kwegama elithi AUKEY U50. Yeyona tshaja incinci inamandla esiyifumana kolu luhlu, ngamandla angama-24 W. Nangona iseyindlela elungileyo yokuyijonga, ngakumbi kuba kuphela kwoluhlu olunezibuko ezimbini ze-USB.
Yizibuko lesibini le-USB. Ngombulelo kuyo, abasebenzisi baya kuba nethuba lokudibanisa ngaphezulu kwesixhobo esinye ngaxeshanye kuyo. Ukongeza, iyahambelana nezixhobo ezininzi ezahlukeneyo, ukusuka kweyona nto iphambili, njenge-Samsung, i-HTC, iGoogle okanye i-LG, phakathi kwezinye izinto ezininzi. Ke unokufumana okuninzi kuyo.
Njengakwitshaja yangaphambili, ngumzekelo omncinci, kukhululekile ukunxiba ngalo lonke ixesha. Imilinganiselo ethile yale tshaja yile: 58 x 44 x 25mm. Ke uyabona ukuba ithatha indawo encinci kwaye ungayithatha xa usiya emsebenzini okanye uhambe ngokulula.
Le tshaja ye-AUKEY izakuphehlelelwa ngokusesikweni kweyoMqungu. Ukuba unomdla, unokufunda ngakumbi ngayo kwiAmazon, kule khonkco.
Itshaja yokugqibela kolu luhlu lwe-AUKEY GaNFast yile modeli iza phantsi kwegama elithi Y21. Kule meko, ine-USB 3.0 isinxibelelanisi, Luhlobo lwesinxibelelanisi esisibonayo kakhulu kwii-smartphones zangoku, ngakumbi phakathi kweempawu ze-Android. Ke inani elikhulu labasebenzisi liya kuba nakho ukuxhamla kule tshaja kwizixhobo zabo. Kwakhona, iyahambelana neempawu eziphambili kwicandelo.
Sijongene neyona tshaja inamandla kolu luhlu, ngamandla angama-30 W. Ke lukhetho onokuthi uluthathe ngokunenzuzo kule ntlawulo ikhawulezayo. Uyilo luyaqhubeka ukuba lelinye lamaqhosha kule tshaja, ngobungakanani obuncitshisiweyo. Imilinganiselo yayo ethile yile: 58 x 43.5 x 25.2mm.
Le tshaja ivela ku-AUKEY izokwaziswa ngokusesikweni kwimarike ngoJanuwari. Ukwazi ngakumbi ngayo, ukongeza kwezinye zeemodeli ezihambelana nayo, ungangena kwesi sixhobo.
I-AUKEY ikuqinisekisile oko ukumiliselwa kolu luhlu lweeshaja zeGaNFast kuya kwenzeka ngoJanuwari. Nangona okwangoku singenawo umhla wayo, kunye nexabiso eziya kuba nazo iitshaja. Nangona uphawu luyaziwa ngexabiso lalo elikhulu lemali. Siyathemba ukuba sinolwazi oluthe kratya malunga noku kungekudala.
¿Ucinga ntoni ngolu luhlu lutsha lweetshaja ngokutshaja ngokukhawuleza kwegama?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » IGaNFast: Uluhlu olutsha lweeshaja zokutshaja ngokukhawuleza ezivela kwi-AUKEY
Uyenza njani iphepha ku-Facebook